MIUI V6 manadihady ny fanavaozana ny Xiaomi Kit Kat 4.4.4 | Androidsis
Iray amin'ireo zavatra tsara indrindra ataonao Xiaomi, ho fanampin'ny fomba lozika sy ny lazany azy famokarana terminal terminal Android tena mampino ary amin'ny vidiny mihoatra ny fanitsiana. Izy io dia amin'ny zavatra rehetra mifandraika amin'izany ny fanavaozana ofisialy ny terminal anao rehetra, ny terminal izay mahazo fanavaozana ofisialy ny Android Android amin'ny fomba ofisialy ary miaraka amina tranokala namboarina miaraka amin'ny sosona MIUI izay novolavolaina tsara ho an'ireo terminal rehetra novokarin'ny marika sinoa izay nanjary fakan-kevitra lehibe teo amin'ny sehatra Android.
Araka ny hitanao amin'ny horonan-tsary mifandraika amin'ny lohatenin'ity lahatsoratra ity dia manana izahay nohavaozina ny Xiaomi RedMi Note 4G amin'ny Android 4.4.4 amin'ny alàlan'ny MIUI V6, ary lazainay aminao ny vaovao rehetra hitanay amin'ity kinova vaovao nohavaozina tanteraka MIUI V6.
Anisan'ireo olana lehibe tokony hasongadina, rehefa asehoko anao tsara amin'ny horonantsary mifamatotra, azontsika atao ny manasongadina izany famolavolana translucent vaovao an'ny bara fampandrenesana, ny multitasking vaovao, ny vondrona vaovao isaky ny sokajy ao amin'ny menio fanovana na ny fanavaozana tanteraka ny fangatahana fakantsary manome azy fikitika vaovao kokoa noho ny tamin'ny kinova taloha an'ny fampiharana.
Ho fanampin'ny fanavaozana ny rindranasa Xiaomi anao manokana, fakan-tsary, mozika, fiarovana, galeriana, horonan-tsary, radio FM, kompas, sns, sns, azontsika atao koa ny manamarina ny fandefasana ireo rindranasa ireo dia nanitsy hatramin'ny faran'izay betsaka mba hahazoana tombony azo avy amin'ireo terminal mampihetsi-po an'ny marika sinoa ireo. Ohatra sy amin'ny tranga mahakasika antsika RedMi Note 4G, azontsika atao ny manamarina ny fomba ny haavon'ny kalitaon'ny fakantsary mbola mitombo miharihary misaotra ireo toe-javatra vaovao napetraka tamin'ity fanavaozana ity MIUI V6 Android 4.4.4 Kit Kat.
Raha fintinina, araka ny efa nolazaiko tao amin'ny horonantsary, a fanavaozana lehibe napetrak'i Xiaomi amin'ity kinova MIUI V6 vaovao ity Izany, raha teo aloha dia efa iray amin'ireo soso-kevitr'ireo ankafiziko indrindra, ankehitriny, miaraka amin'ity fiakarana endrika vaovao ity, dia tsy isalasalana fa nahazo tombony sy fampiasa amin'ny rafitra ary fitehirizana bateria.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Xiaomi » Notsapainay tsara ny kinova Miui V6 vaovao amin'ny Android 4.4.4 Kit Kat
Ahoana no hataonao amin'ny fampiharana vatofantsika toy ny whatsapp, gmail, sns ...?
Satria raha nakatona izy ireo dia tsy voaray ny hafatra na mailaka, na toa azoko izany.
Angamba ao amin'ny rom an'ny miui.es izay tsy mitranga intsony.
Izy io dia manelingelina kely ny olan'ny fahazoan-dàlana, miaraka amin'ny safidy betsaka ananan'ity finday ity.
Tsy nanao na inona na inona aho ary azoko tsara ny fampandrenesana rehetra avy amin'ny fampiharana, Hangouts, Gmail, WhatsApp, Telegram, sns, sns.
Yovani Argueta dia hoy izy:
azo apetraka ho irery ao amin'ny s5 |
Valiny tamin'i Yovani Argueta
Sakano izay karazana antontan-taratasy amin'ny SimpleScan